Ahoana ny fomba hifehezana ny fifamoivoizana amin'ny sivana amin'ny Google Analytics? & Ndash; Mampiseho valim-bavaka ny seminera
Ahoana ny fomba hifehezana ny fifamoivoizana amin'ny sivana amin'ny Google Analytics? - Mampiseho valim-bavaka ny seminera
Mety tsy ho vitantsika rehetra ny handrava ny fifamoivoizana amin'ny spam miaraka amin'ireo sivana Google Analytics. Misy ny fahafaha-mitranga raha mitranga izany amin'ny olona rehetra tahaka ny spammers amin'ny toerana maro isan-karazany. Mampidi-doza ho an'ny orinasanao ary mety hanimba ny lazanao amin'ny aterineto. Ny olana iray hafa dia ny fifamoivoizana ara-pahasalamana, ary ny spam dia tsy manome valiny marina amin'ny teny tranokala . Izy ireo dia manome fomba fijery anao hatrany amin'ny taham-pitenenana avo lenta, izay mahatonga anao hahatsapa fa mahazo isan'andro sy misimisy kokoa ianao isan'andro. Zava-dehibe ho antsika ny mahazo hevitra vitsivitsy monja isan'andro, izay miantoka ny kalitaony. Mifanohitra amin'izany kosa, ireo vohikala izay mahazo fomba fijery maro sy latsakemboka tsy dia sarobidy dia mety tsy hitondra fitarihana marobe. Raha anisan'izy ireo ianao, tsy maintsy manova ny paikady ianao ary manangana fahitana azo atokisana amin'ny aterineto. Na dia fantatrao aza fa misy ireo spam, dia tsy tokony hiady hevitra amin'izy ireo ianao ary hamorona sivana sasany mba hanafoanana azy ireo amin'ny ankapobeny.
Soa ihany fa misy teknika sy fomba sasany azo atao mba hisorohana ireo mpitsoa-ponenana amin'ny Google Analytics. Afaka mamorona sivana ianao ary mamaha ny olanao amin'ny Internet.
Toeram-piasana matihanina avy amin'ny Semalt Digital Services, Ivan Konovalov, jereo eto ny sasany amin'ireo zavatra fototra tokony hotadidinao:
Mamorona fomba fijery vaovao
Tsara ny manangana fomba fijery vaovao alohan'ny hanoranao ny fanovana ao amin'ny kaontinao Google Analytics..Tokony hamolavola filtre vaovao tsy voapentimpentina ianao ary hamafa ireo zavatra ireo amin'ny ampahany. Amin'ny voalohany, ity dingana ity dia haka fotoana kely saingy afaka manampy anao hanomana tatitra tsara. Tokony hivezivezy amin'ny fizotran'ny Admin ao amin'ny kaontinao Google Analytics ianao ary manitsy ny View Setting. Eto ianao dia tokony hanangana fomba fijery samihafa sy filtre samihafa ary hampifandray azy ireo.
fametrahana sivana iray feno
Azonao atao ny mametraka filaharam-be marobe miorina amin'ny zavatra takinao. Raha sendra misy fisalasalana momba ny fomba hamoronana filtres, dia manoro hevitra anao izahay mba hanamarina ireo toro-hevitra Google izay hita ao amin'ny aterineto, saingy zavatra vitsivitsy mila ny fiheveranao vetivety dia ny fampiantranoana valin-kafatra, loharanon-kevitra, fanovana eo amin'ny fiteny, ary bebe kokoa.
Tsy mety ny milaza fa ny fifamoivoizan'ny tranonkala rehetra dia tsy maintsy mamakivaky ireo mpampiantrano sy ny servers mba hahazoana antoka fa tsy manelingelina ny kalitao. Ny vaovao dia azo jerena ao amin'ny Google Analytics. Ny anaran'ny mpampiantrano valo dia anarana ara-dalàna izay mifandray amin'ny tranonkalanao ary afaka manisika ny valin'ny fikarohana miorina amin'ny sehatrao. Raha reraka amin'ny taham-pitenenana ambony ianao, dia azonao atao ny manandrana ny safidy hitranga amin'ny tranokalanao. Fa tokony ho azonao antoka foana fa tsy ho voafandrika ianao amin'ny anaran'ny mpampiantrano iray satria mety hanimba ny tranokalanao izany.
Tsy maintsy manana hevitra ianao hoe avy aiza ny fifamoivoizan'ny tranonkala. Amin'ny famoronana filtre, afaka mahafantatra ireo loharanom-pifandraisana ianao ary mahazo vaovao momba ny adiresy IP.
Fikirana amin'ny fiteny
Maro amin'ireo mpitsikilo sy mpitsikilo no manararaotra ny tranokalanao sy ny toerana misy anao amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana. Ankoatra izany, dia tratrany ny fari-piainan'ny fiteninao, ary mihetsika be dia be ny sivana. Ny fomba tsara indrindra hanafoanana azy ireo dia ny fanaraha-maso ny fahombiazan'ny tranonkalanao isan'andro. Tokony hojerenao ny fomba fijerinao maro sy ny fomba hanatsarana ny taham-pidirana Source .